အပြာကားတွေ စွဲနေပြီလား ??? – Gentleman Magazine
အပြာကားတွေ စွဲနေပြီလား ???
09/07/2017 08/07/2017 escapetravelmagazine
အပြာကားတွေကို တော်ရုံစိတ်ဝင်စားမှုမျိုးက လက်မခံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အပြာကားတွေကို မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသလို စွဲလမ်းတဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ မကောင်းတော့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် သင့်ကိုယ်သင် အပြာကားစွဲလမ်းနေပြီလားဆိုတာကို ဒီအချက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလိုက်ပါ။
၁။ လူမှုရေးတွေ ရှောင်လာမယ်။
သင့်ရဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုဝင်တွေက အတူတကွ တွေ့ဆုံကြဖို့၊ သွားကြလာကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းနေဖို့ပဲ စိတ်အားထက်သန်နေမယ်။ ဒီလို လူမှုရေးကိစ္စတွေကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပြီး အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း နေခဲ့ရဖို့ပဲ ကြိုးစားနေမယ်၊ အိမ်ရောက်တာနဲ့ အပြာဇာတ်လမ်းတွေ ဖွင့်ကြည့်နေတတ်မယ်ဆိုရင် စွဲလမ်းစပြုနေပါပြီ။
၂။ အပြာကားကြည့်တာကို လျို့ဝှက်ထာမယ်။
လိင်မှုကိစ္စတွေ၊ အလေ့အကျင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လူအများစုက လျို့ဝှက်ထားတတ်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အပြာကားစွဲလမ်းနေတဲ့သူတွေကတော့ သူတို့အနေနဲ့ အပြာကာတွေကို မကြာခဏကြည့်တတ်တာကို လုံးဝအသိမခံနိုင်လောက်အောင်ကို လျို့ဝှက်ထားတတ်ကြပါတယ်။
၃။ အပြာကားကြည့်ပြီး အချိန်ကုန်မှန်းမသိဖြစ်လာမယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ အပြာကားတွေ၊ ဇာတ်လမ်းအပိုင်းအစလေးတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုရှာကြည့်ရင်း နာရီကြည့်လိုက်မိချိန်မှာ အချိန်လေးငါးနာရီကုန်သွားတာမျိုး ဖြစ်နေပြီဆိုရင် သင်အပြာကား စွဲနေပါပြီ။ အပြာကားတွေကလည်း အချိန်ကို မေ့သွားစေပြီး ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်မှုကို ကင်းမဲ့သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အရက်ကြောင့် အသိစိတ်လွတ်သွားသလိုမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၄။ လက်တွေ့လိင်မှုဘ၀မှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာတယ်။
အပြာကားတွေကို တစိုက်မတ်မတ်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် တကယ့်လက်တွေ့မှာ လိင်စိတ်နိုးကြားဖို့အတွက် အခက်အခဲတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။ သင့်ပါတနာနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ကူးယဉ်ဆန်နေဖို့၊ အပျိုးလေးကို သေချာလုပ်ပေးဖို့တွေ စိတ်မ၀င်စားတော့ပဲ အပြာကားတွေထဲကလို လုပ်ဆောင်ဖို့ပဲ စိတ်အားထက်သန်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းသမားဆိုရင်လည်း အပြာကားကြည့်ပြီး မကြာခဏစိတ်ဖြေခြင်းက သင့်ရဲ့လိင်စိတ်နိုးကြားမှုကို လျော့နည်းစေနိုင်ပြီး တကယ်တိုက်ပွဲမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
၅။ တကယ့်လိင်ကိစ္စကိုလည်း အပြာကားတွေလိုပဲ ဖြစ်ချင်လာတယ်။
သင့်ရဲ့ အတူဖက်ပါတနာကို သင်အကြိုက်ဆုံး အပြာကားဇာတ်ဆောင်မင်းသမီးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နေမယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင်ကြည့်ဖူးတဲ့ အပြာကားထဲက ဇာတ်ကွက်အတိုင်း လုပ်ကြည့်ချင်နေတယ်။ သင့်ပါတနာက လိုက်လုပ်ဖို့ ငြင်းဆန်နေရင်တောင်မှ သင်က စိတ်ဆိုးနေတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အပြာကားစွဲလမ်းနေတာ သေချာပါတယ်။
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တာပြီး ယောင်္ကျားလေးတိုင်း အားကျစေမည့်
အပွာကားတှေ စှဲနပွေီလား ???
အပွာကားတှကေို တျောရုံစိတျဝငျစားမှုမြိုးက လကျမခံနိုငျစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အပွာကားတှကေို မူးယဈဆေးဝါးစှဲသလို စှဲလမျးတဲ့အဆငျ့ရောကျလာပွီဆိုရငျတော့ မကောငျးတော့ပါဘူး။ ဒါဆိုရငျ သငျ့ကိုယျသငျ အပွာကားစှဲလမျးနပွေီလားဆိုတာကို ဒီအခကျြတှနေဲ့ တိုကျဆိုငျစဈဆေးလိုကျပါ။
၁။ လူမှုရေးတှေ ရှောငျလာမယျ။
သငျ့ရဲ့ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှေ ဒါမှမဟုတျ မိသားစုဝငျတှကေ အတူတကှ တှဆေုံ့ကွဖို့၊ သှားကွလာကွဖို့ ဖိတျချေါပမေယျ့ တဈယောကျတညျးနဖေို့ပဲ စိတျအားထကျသနျနမေယျ။ ဒီလို လူမှုရေးကိစ်စတှကေို တတျနိုငျသမြှရှောငျပွီး အိမျမှာတဈယောကျတညျး နခေဲ့ရဖို့ပဲ ကွိုးစားနမေယျ၊ အိမျရောကျတာနဲ့ အပွာဇာတျလမျးတှေ ဖှငျ့ကွညျ့နတေတျမယျဆိုရငျ စှဲလမျးစပွုနပေါပွီ။
၂။ အပွာကားကွညျ့တာကို လြို့ဝှကျထာမယျ။
လိငျမှုကိစ်စတှေ၊ အလအေ့ကငျြ့တှနေဲ့ ပတျသကျလာရငျ လူအမြားစုက လြို့ဝှကျထားတတျကွတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အပွာကားစှဲလမျးနတေဲ့သူတှကေတော့ သူတို့အနနေဲ့ အပွာကာတှကေို မကွာခဏကွညျ့တတျတာကို လုံးဝအသိမခံနိုငျလောကျအောငျကို လြို့ဝှကျထားတတျကွပါတယျ။
၃။ အပွာကားကွညျ့ပွီး အခြိနျကုနျမှနျးမသိဖွဈလာမယျ။
အငျတာနကျပျေါမှာ အပွာကားတှေ၊ ဇာတျလမျးအပိုငျးအစလေးတှေ တဈခုပွီးတဈခုရှာကွညျ့ရငျး နာရီကွညျ့လိုကျမိခြိနျမှာ အခြိနျလေးငါးနာရီကုနျသှားတာမြိုး ဖွဈနပွေီဆိုရငျ သငျအပွာကား စှဲနပေါပွီ။ အပွာကားတှကေလညျး အခြိနျကို မသှေ့ားစပွေီး ကြိုးကွောငျးဆငျခွငျနိုငျမှုကို ကငျးမဲ့သှားစနေိုငျပါတယျ။ အရကျကွောငျ့ အသိစိတျလှတျသှားသလိုမြိုး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
၄။ လကျတှလေိ့ငျမှုဘဝမှာ အနှောကျအယှကျဖွဈလာတယျ။
အပွာကားတှကေို တစိုကျမတျမတျကွညျ့နမေယျဆိုရငျ တကယျ့လကျတှမှေ့ာ လိငျစိတျနိုးကွားဖို့အတှကျ အခကျအခဲတှေ ရှိလာတတျပါတယျ။ သငျ့ပါတနာနဲ့ ဆကျဆံတဲ့အခါမှာလညျး စိတျကူးယဉျဆနျနဖေို့၊ အပြိုးလေးကို သခြောလုပျပေးဖို့တှေ စိတျမဝငျစားတော့ပဲ အပွာကားတှထေဲကလို လုပျဆောငျဖို့ပဲ စိတျအားထကျသနျနတေတျပါတယျ။ တဈယောကျတညျးသမားဆိုရငျလညျး အပွာကားကွညျ့ပွီး မကွာခဏစိတျဖွခွေငျးက သငျ့ရဲ့လိငျစိတျနိုးကွားမှုကို လြော့နညျးစနေိုငျပွီး တကယျတိုကျပှဲမှာ စှမျးဆောငျရညျကဆြငျးစနေိုငျပါတယျ။
၅။ တကယျ့လိငျကိစ်စကိုလညျး အပွာကားတှလေိုပဲ ဖွဈခငျြလာတယျ။
သငျ့ရဲ့ အတူဖကျပါတနာကို သငျအကွိုကျဆုံး အပွာကားဇာတျဆောငျမငျးသမီးနဲ့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့နမေယျ။ ဒါမှမဟုတျ သငျကွညျ့ဖူးတဲ့ အပွာကားထဲက ဇာတျကှကျအတိုငျး လုပျကွညျ့ခငျြနတေယျ။ သငျ့ပါတနာက လိုကျလုပျဖို့ ငွငျးဆနျနရေငျတောငျမှ သငျက စိတျဆိုးနတေတျမယျဆိုရငျတော့ အပွာကားစှဲလမျးနတော သခြောပါတယျ။
မိနျးကလေးတိုငျး တောငျ့တာပွီး ယောင်ျကြားလေးတိုငျး အားကစြမေညျ့
Health Knowledge Love
12/11/2020 12/11/2020 mmgentlemanmagazine
Previous: ချစ်တင်းနှောရန် စိတ်လှုပ်ရှားအကောင်းဆုံးနေရာများ
Next: အရင်းအနှီးနည်းနည်းနဲ့ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ နည်းလမ်း(၄)ခု
သင် အာသာဖြေတာ များနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြတဲ့ လက္ခဏာ ၁၀ မျိုး
လိင်ကိစ္စအပြီးမှာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ ကိစ္စ ၁၀ ခု
ကိုယ်အရပ်မောင်းနဲ့ ရှိသင့်တဲ့ အလေးချိန် ပြဇယား